‘चार लाख मानिसले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ’ – Aarthik Dainik
अन्तर्वार्ता Posted on ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ११:२७
गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको क्यान इन्फोटेक मेलाको २६औं संस्करण भृकुटीमण्डपमा जारी छ । बुधबारसम्म सञ्चालन हुने मेलामा चार लाख मानिसले अवलोकन गर्नसक्ने अनुमान आयोजकको रहेको छ । हरेक वर्ष क्यानले यस्तो मेला आयोजना गर्दै आएको छ । क्यानले सातवटा प्रदेशसहित संघीय राजधानी काठमाडौँ र नेपालगञ्जमा गरी यो वर्ष नौवटा मेला आयोजना हुने भएको छ । केही प्रदेशमा यस्ता मेला सम्पन्न भइसकेको पनि छ ।
भृकुटीमण्डपमा जारी मेलामा एक सय ८६ स्टलहरू रहेका छन् । जारी इन्फोटेकमा सामान खरीदबिक्रीभन्दा पनि कम्पनीहरूको प्रडक्ट तथा सर्भिसको ब्रान्डिङमा जोड दिइएको छ । मुख्य हलभित्र रहेको ४० वटा स्टलहरूमा प्राय कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ प्रडक्ट तथा सर्भिसहरू प्रर्दशन गरिरहेका छन् । व्यापारभन्दा पनि सर्वसाधरणले मेलामार्फत डिजिटल प्रविधिबारे बढी जानकारी लिन सक्नेछन् । मेला आयोजना गर्नुको उद्देश्यका बारेमा केन्द्रित रहेर क्यान महासंघका अध्यक्ष कुँवरसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानी :
महासंघद्वारा भृकुटीमण्डपमा आयोजित क्यान इन्फोटेक मेलाको रौनक कस्तो चलिरहेको छ ?
क्यान इनफोटेक मेला उत्साहका साथ चलिरहेको छ । विगत वर्षहरूको भन्दा यो वर्ष हामीले डेकोरेसननमा पनि परिवर्तन गरेका छौँ । मेलामा रहेका यहाँभित्रका स्टलहरू पनि भिन्ना–भिन्नै सेक्टरमा रहेको हुनाले अवलोकनकर्ता सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको मेलामा अवलोकनकर्ताहरूले नयाँ–नयाँ प्रविधिका बारेमा जानकारी लिइरहेका छन् ।
यसैगरी विद्यार्थीहरूको लागि हामीले प्रवेश शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरेका छौँ । अरुलाई भने प्रतिव्यक्ति एक सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकेका छौँ । यसअघि काठामाडौँ मात्र मेला आयोजना हुँदै आएकोमा यो वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा पनि मेला आयोजना गरिएको छ । क्यान इन्फोटेक मेला अवलोकन गर्न आउने भिजिटरहरूले टिकट काट्ने लामो लाइनमा बस्नुपर्नेछैन । किनभने धेरैले मोबाइल पेमेन्टबाटै टिकट लिन सक्नेछन् । छुटेकाहरूले पनि भित्र छिर्नुअघि किओक्स मेसिनमा नगद राखेर प्रिन्टेट टिकट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मेला अवलोकन गर्न आउनेहरूले पहिलाको भन्दा जारी इन्फोटेकमा के फरक कुराको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ?
यो मोलामा हामीले नेपालभित्र प्रविधिमा विकास भएका क्षेत्र इनोभेटिभका क्षेत्रहरूलाई महत्व दिएका छौँ । साथै शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल कति अगाडि छ त सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई पनि मेलामा सहभागी गराइएको छ । नेपालको सूचना प्रविधिको इतिहास हेर्ने हो भने ब्रोडम्यान र साइबर क्षेत्र अगाडि रहेको छ । यो विषयलाई पनि हामीले मेलामा समेटेका छौँ ।
मुलुकलाई डिजिटल इकनोमीसँग जोडेर हेनुपर्ने विषय बाहिर आएका छन् । तर, हाल जारी मेलामा अवलोकनकर्ताहरूको संख्या हेर्दा केही घटेको पाइएको छ नि ?
यसका दई-तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो पक्ष भनेको हामी २६औं संस्करणमा आइपुग्दाभन्दा अगाडि २० देखि २२औं संस्करणमा प्रविधिसम्बन्धी जानकारी लिने माध्यम थिएनन् । मुलुकभरि नै एउटा मात्र क्यान इन्फोटेक मेलाको आयोजना त्यो पनि राजधानी काठमाडौँमा मात्रै हुने गरेको थियो । अहिले पछिल्लो समयमा आएर सोसल मिडियाको संख्या पनि बढेका छन् । व्यक्तिगतरूपमा पनि आ–आफूले सोसल मिडिया चलाउन थालेका पनि छन् । त्यसैगरी हामीले पनि यस्ता मेला जिल्ला र प्रदेशस्तरमा पनि आयोजना गर्न थालेका छौँ । यसबाट पनि केही संख्या घटेको हो किजस्तो देखिएको छ । तर, जो यहाँ आउनुभएको उनीहरू प्रडक्टिभहरू नै आउनुभइरहेको छ । अहिले जारी मेलाालाई हामीले विद्यार्थीदेखि नेपाल सरकारका कर्मचारी, व्यापारी र गृहणीहरूलाई समेत उपयागी हुने खालका सूचनामूलक प्रविधहरू राखेकोले पनि मेलाको आकर्षणमा कमी आएको छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
मेलाबाट हुने उपलब्धिका बारेमा क्यानले के अपेक्षा गरेको छ ?
मुख्य उपलब्धि भनेको त सूचना प्रविधिबारे पछिल्लो चरणमा भएको विकासको जानकारी दिनु नै रहेको छ । यसअघिको मेलाहरूमा व्यापारलाई पनि फोकस गर्ने गरिन्थयो । अहिले त्यसो नगरेर प्रर्दशनीलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छौँ । हाल चल्तीमा आएका प्रविधिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर जनमानसमा जानकारी गराउने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो । यो वर्ष हामीले व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यहाँबाट अहिले खासै कारोबार गर्ने उद्देश्य राखिएको छैन ।
अहिले जारी यो मेलामा कति भिजिटरहरूले अवलोकन गर्छन् भन्ने अपेक्षा तपाइँहरूको रहेको छ ?
हामीले अनुमान गरेको संख्या भनेको चार लाख जति हो । आज आइतबारसम्म डेढ लाखभन्दा बढीले नै मेलाको अवलोकन गरिसक्नुभएको छ । अझै मेला बुधबारसम्म चल्ने भएकोले पनि हामीले सोचेको भन्दा बढीले नै मेलाको अवलोकन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको ब्रान्डिङ नै हो ।
तपाईंहरूले जारी क्यान इन्फोटेक मेलाको कुल खर्च कति हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
यो ठाउँको लागि मात्र हामीले झण्डै तीस लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा अर्को ५० लाख जति खर्च भएको छ । केही खर्च हामीले स्पोन्सरबाट जुटाएका छौँ भने केही शुल्क स्टलहरूसँग लिएका छौँ । हामीले यो मेलामा करिब डेढ करोड जति खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ ।
अवलोकनकर्ताहरूको लागि मुख्य आकर्षक प्रविधिहरू मेलामा के–के रहेका छन् ?
मुख्य आकर्षक नै इनोभेटिभ पार्टस, मोबाइल, मोबाइल बैंकिङ, गेटवेहरू छन् । कम्प्यूटर पार्टस र कम्प्युटहरूमा पनि धेरै नयाँ प्रविधिहरू भित्रिएका छन् । जस्तो एउटै कम्प्यूटरमा पनि दुई÷तीनवटा स्क्रिनहरू रहेको देख्न सकिन्छ । तीन हजारदेखि चार हजार मिटरको दूरीसम्म टिप्ने क्षमताका इन्टरनेटका राउटरहरू देख्न पाउँछौँ । यसैगरी एकै मिनेटमा चारदेखि पाँच सय पेजसम्म प्रिन्ट गर्नसक्ने प्रिन्टरहरू पनि मेलामा रहेका छन् । त्यति मात्र होइन प्रिन्ट भएको पेपरलाई मेटेर पुनः प्रिन्ट गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रविधिहरूसमेत मेलामा देख्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा डिजिटलसम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधिहरू मेलामा अवलोकन गर्न सकिनेछ ।
अवलोकनकर्ताहरूले मेलामा सामान खरीद गर्दा के–कस्तो अफरहरू प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ ?
ब्राण्डहरूमा धेरै अफरहरू रहेका छन् । मोबाइल सेक्टरमा जानुभयो भने एनसेलको सिम एक रूपैयाँमा, दश मिनेटको निःशुल्क टक टाइम र दशवटा एसएमएस प्राप्त गर्नसक्ने अफर छ । यसैगरी भायोनेटले टिभीको लागि विशेष अफर दिएको छ । मोबाइल कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । हार्डवेयर, ल्यापटप, कम्प्युरटर मोनिटरहरूमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भारी छुटमा आफ्ना सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी सिम निःशुल्क प्रदान गरिहेको छ । सागर ग्रुपले प्रिन्टर, एन्टीभाइरस, प्रोजेक्टर र अन्य प्रडक्टहरूमा पनि छुट अफर दिएको छ । त्यसैगरी आसुस, साथी कम्प्यूटर, नारायणी र मर्कान्टाइलले ल्यापटप र अन्य प्रडक्टहरूमा केही छुट प्रदान गरेको अवस्था छ ।
सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई महत्व दिएर पेपरलेस बनाउँदै प्रविधिमा जोड दिइरहेको छ, यसलाई क्यानले कसरी लिइरहेको छ ?
नेपालको प्रविधिको समग्र क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यो क्षेत्रको तुलना अहिले अरुसँग गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारले नै मुलुकलाई डिजिटलाइज गर्ने भनिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्रको महत्व अझ बढेर गएको छ । सरकारले नै यो क्षेत्रलाई महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखेपछि त यसको महत्व र भविष्य कल्पना गर्न नसकिने गरी बढेर गइरहेको छ । सरकारी क्षेत्रबाट दिने सेवा पनि प्रविधिमैत्री भइरहेको छ । उद्योग कलकारखानाले पनि सूचना प्रविधिमार्फत नै धेरै कुरा गर्न थालिसकेका छन् । यी कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रमा रोजगारी निकै बढेर गएको छ । समय–समयमा हुने यस्ता मेला त झन् प्रविधिबारे चासो राख्नेहरूको लागि बुझ्ने र जान्ने ठूलो अवसर नै हो ।
व्यापार घाटा छ खर्ब ३७ अर्बमा सीमित
उत्तरी चुरे क्षेत्रमा काठ तस्करी बढ्दो
२६ चैत्र २०७६, बुधबार ०९:१३
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ११:३३
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १६:१०
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १५:५१
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १५:३२